Maxaa looga baahan yahay Golaha Shacabka bilooyinka ay fasaxa ku jiraan? – Kalfadhi
Maxaa looga baahan yahay Golaha Shacabka bilooyinka ay fasaxa ku jiraan?
January 23, 2019 Kalfadhi
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya sanad walba waxa uu yeeshaa Laba Kalfadhi oo midkiiba ah 4 bil, sidoo kale waxay galaan 4 bil oo fasax ah. Xili kasta oo ay fasax galaan Baarlamaanka Soomaaliya waxaa looga baahan shaqooyin gaar ah oo aan laga baaqsan karin.
Waxyaabaha laga doonayo waxaa ka mid ah, in ay ka wardoonaan xaaladda dadka ku nool deegaannadii laga soo doortay, iney warbixin ku celiyaan Xukuumadda, iney dib ugu laabtaan qoysaskooda iyo in Gudiyada joogtada ah aysan gelin fasax oo ay shaqada sii socoto inta Xildhibaanada fasax ku jiraan.
Xildhibaan Caasho Koos Maxamuud Cumar oo la hadashay Kalfadhi ayaa sheegtay in Baarlamaanka looga baahan yahay iney door muhiim ah siiyaan degaanadii laga soo doortay si ay u ogaadaan Baahiyaha ka jira deegaanadaasi. Caasho Koos ayaa sheegtay in Xildhibaanka looga baahan-yahay inuu soo qiimeeyo nolasha guud ee degaanka kadibna uu warbixin ku soo celiyo Gudiyada iyo Xukuumadda maadaama uu matalo shacabka degaankii uu booqday
“Marka uu xirmo Kalfadhiga Baarlamaanka, Guddiga Joogtada ah fasax ma galo oo howshii Baarlamaanka ayuu sii wadaa, Xubnaha kale ee Xildhibaanada waxay isugu jiraan kuwo booqda degaanadii laga soo doortay iyo qaar fasax iska gala oo caruurtii iyo reerihii ay ka yimaadeen dib ugu noqda”, ayey Kalfadhi u sheegtay Xildhibaan Caasho Koos Maxamuud Cumar oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya
Caasho Koos oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegtay in Xildhibaanda mashquul kasta oo ay galaan in looga baahan yahay in ugu yaraan 15 cesho ku soo qaato degaankii laga soo doortay islamarkaana uu la kulmo Odayaasha, Culumada iyo qeybaha kale ee Bulshada uu matalo.
“waxaa ugu muhiimsan in ay degaanadii laga soo doortay lagu laabto, ugu yaraan 15-cisho, Xildhibaanada qaarkood ma, awoodaan iney tagaan degaankooda, kuwaas oo kale waxay heli karaan dad ka yimid oo xog ogaal ah”, ayey hadalkeeda raacisay Xildhibaan Caasho Koos.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo sidoo kale la hadlay Kalfadhi ayaa sheegay in masuuliyad weyn ay saarantahay Xildhibaanka islamarkaana uu matalo degaan iyo kumanaan shacab ah oo ay suurtagal tahay iney ka jirto xaalad adag waana sababta ay wakiilada Shacabka u yihiin Baarlamaanka Soomaaliya.
“Waa iney tagaan degaanka ay matalaan, soo indha indheeyaan xaalada xitaa ay ka jirto barwaaqo iyo hadii ay ka jirto dhibaato, Xildhibaanku waxa uu xog heli karaa markii uu degaanka tago”, ayuu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
“Laba bilood oo fasax ah ayuu Xildhibaanku heestaa, waa inuu waqtigiisa u qeybiyaa reerkiisa iyo carruurtiisa iyo waliba degaankii laga soo doortay”, ayuu yiri Xildhibaan Dalxa. ” waxaa jira waa jibaad kale oo saaran Xildhibaanka, waxaa ka mid ah inuu ogaado siyaasadda guud ee dalka ee maahan oo kaliya degaankiisa, inuu ogaado sida ay u socdaan shaqooyinka”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Dalxa.
“Waxaa hubaal ah marka Xildhibaannadu ay tagaan degaanadii laga soo doortay in ay la kulmayaan Bulshada qeybaheeda kala duwan iyo Maamulada degaanka ka jira, intaba waxay kala arrinsanayaan xaaladda guud ee deegaanka”, ayuu ku soo celi celiyay Xildhibaan Dalxa.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa markii ay tagaan degaanada ay ka soo jeedaan Sidoo kale waxaa looga baahan yahay iney warbixino siiyaan Xukuumadda Soomaaliya si ay uga fal celiso dhibkii ay soo wariyaan Xubnaha Baarlamaanka. Sidoo kale waxaa la sheegay in looga baahan yahay iney ku dabagalaan fulinta warbixintooda.
“Waxaa looga baahan yahay warbixin Xildhibaankii degaankiisa tago, waa inuu Xukuumadda u gudbiyaa kuna dabagalaa fulinteed”, ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay Xildhibaan Dalxa oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Barafasoor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya Arrimaha Siyaasadda ayaa sheegay in waajibaad culus uu saaran yahay Baarlamaanka Soomaaliya ayna adagtahay sida ay uga soo baxaan. Sababtu waxya ku sheegay siyaasiinta oo aan bisleen iyo xaaladda dalka oo aad u adag.
“Xildhibaanadu waxaa looga baahan yahay iney shaqeeyaan, ma jirto nasiino, waayo dad ayey matalaan mana kala gaaraan, laakiin maanta Soomaaliya waxaas kama jirto”, ayuu yiri Barafasoor Maxamed Axmed. “Hadii Xildhibaanku dadka ayaa soo dooran lahaayeen waa ku qasbanaa inuu ku laabta degaanka laakiin hada yuu ka baqayaa ? waa iska dalxiisayaa mana ahan sida saxda ah sidaas”, ayuu Kalfadhi u sheegay Barafasoor Maxamed Axmed Maxaxamuud.
Xasan Sheekh Maxamuud oo ka digay in dalka lagu maamulo Awood
Xildhibaan Sakariye: Sanadka 2020ka hadii dalka doorasho ka dhici weyso in leys dilo ayaa ka dhici doonto